Sweet Snap Camera အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.25.100721 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（47.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Sweet Snap Camera -Beauty Selfie Plus, Face Filter
Sweet Snap ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူသန်း ၁၀၀ ကျော်အသုံးပြုကြသည်။ အကောင်းဆုံး ယခုနှစ်အက်ပလီကေးရှင်းသည် Google Play တွင်! သင်၏ဘဝကို၎င်း၏ထူးခြားသော filter ၊ စတစ်ကာများ နှင့်အလှအပ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နှင့်ဝေမျှနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် GIF emoji အစီအစဉ်များကိုအလွယ်တကူဖန်တီးပါ။ Sweet Snap နှင့်အတူ။ အရည်အသွေးမြင့် တေးဂီတဗီဒီယိုများကို ဖန်တီး၍ သင်၏ဗွီဒီယိုတွင်အခင်းအကျင်းတေးဂီတကိုသင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
⭐ ရယ်စရာစတစ်ကာများ - အရေးကြီးသောအချိန်တိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။ ⭐ချစ်စရာကောင်းတဲ့? ရယ်စရာလား ဖက်ရှင်? Kawaii စတစ်ကာများ၊ တိရိစ္ဆာန်စတစ်ကာများ၊ ကြွက်သားစတစ်ကာများ၊ တက်တူးထိုးစတစ်ကာများ၊ မုတ်ဆိတ်စတစ်ကာများ၊ ဓာတ်ငွေ့စတစ်ကာများနှင့်အထူးတိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောစတစ်ကာ ၂၈၀၀ ကျော်ကို Sweet Snap မှထောက်ပံ့ပေးသည်။ ယခုသင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုအနုပညာလက်ရာသို့လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။
⭐ Art Filter - selfie ဓာတ်ပုံတိုင်းကိုအံ့သြစရာဖြစ်စေရန် food အစားအစာ? ရှုခင်းများ? ရှုခင်းလား ပုံတူ Sweet Snap ရှိ filter တိုင်းသည်သင်၏ပုံများကိုထင်ရှားစေသည်။ တည်းဖြတ်ရန်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်သာမန်ဓါတ်ပုံများကိုတောင်မှဘဝသို့ကူးပြောင်းရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
⭐ Real-time အလှအပအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - သင်၏သဘာဝကိုအသက်ဝင်စေပါ
ဝက်ခြံပေါက်? အမှား? ဝက်ခြံ? ONE ထိရုံဖြင့်အပြစ်အနာအဆာကင်းသောအသားအရေ၊ တောက်ပသောမျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း၊ သွားများဖြူခြင်းတို့ကိုရယူပါ။
⭐ မိတ်ကပ်ကင်မရာ - အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းရယူပါ။ ⭐
ရွေးချယ်မှုများပြားစွာ လူကြိုက်များသောမျက်ခုံး, နှုတ်ခမ်းနီ၊ ဤနေရာတွင်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောမိတ်ကပ်ပုံစံကိုတွေ့နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောမိတ်ကပ်မိတ်ကပ် selfie အထူးပြုလုပ်ချက်များသည်သင်၏မိတ်ကပ်များကိုလျော့ပါးစေသည့်တိုင်သင့် selfies ကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေသည်။
⭐ GIF နှင့်တိုတောင်းသောဗွီဒီယို - သင့်နေ့စဉ်ကိုတောက်ပစေခြင်း ⭐
၈ စက္ကန့်ကြာသောဗီဒီယိုကိုရိုက်ပြီးလှည့်ပါ GIF တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းကို GIF emoji packages များအနေနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နေ့စဉ်စကားဝှက်ကိုအရောင်တင်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု။ အရည်အသွေးကောင်းသည့်ဂီတဗီဒီယိုများ ဖန်တီး၍ Sweet Face ကင်မရာ၏စာကြည့်တိုက်မှဂီတကိုထည့်ပါ။ ခေတ်မှီသောစတစ်ကာများနှင့်မှော်စစ်ထုတ်စက်များကသင်၏ဗွီဒီယိုကိုထူးခြား။ အံ့သြစရာကောင်းစေသည်။
⭐ အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည် - အမှတ်ရစရာအခိုက်အတန့်များကိုဖမ်းယူပါ။ ⭐
အရည်အသွေးမြင့်သောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ပြီးပါက Sweet Face ကင်မရာမှ Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, YouTube popular TikTok နှင့် Snapchat ကဲ့သို့သောလူသိများသည့်လူမှုရေးဆိုဒ်များကိုမျှဝေနိုင်သည်။
⭐ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ ⭐
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားစာချုပ်ချုပ်ဆိုပါ။
Facebook： @Sweet Snap
ဘာအသစ်လဲ Sweet Snap Camera -Beauty Selfie Plus, Face Filter 4.25.100721
Sweet Snap Camera -Beauty Selfie Plus, Face Filter 4.23.100715
Ko lay Ko lay